Jadwalka Soo-saareyaasha Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda Isbarbardhiga Jadwalka Shiinaha
35mm Qaadista Miiska Kordhinta otomaatiga ah ee tooska ah
Miiskeenna 35mm Tooska ah ee Qaadista Miiska Miisaska oo ay sameysay mashiin sax ah. Waxaan leenahay width 35mm iyo 48mm laba nooc oo kala duwan oo ah miisaska kordhin miiska. Waxaan u habeyn karnaa orodyahanada kordhinta miiska miiskaaga iyadoo loo eegayo qaabka miiskaaga. Haddii aad xiisaynayso bogagga miiska kordhinta, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
35mm Laba dariiqo kordhin miiska qadada miiska oo aan iswaafajin
Hordhac:Miiskeenna 35mm Laba dariiqo ah oo lagu kordhinayo miiska cuntada oo aan iswaafaqeyn oo ay sameysay mashiin sax ah. Waxaan leenahay width 35mm iyo 48mm laba nooc oo kala duwan oo ah miisaska kordhin miiska. Waxaan u habeyn karnaa orodyahanada kordhinta miiska miiskaaga iyadoo loo eegayo qaabka miiskaaga. Haddii aad xiisaynayso bogagga miiska kordhinta, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
35mm miiska miiska wadajirka iskuduwaha kordhinta labalaabid leh quful leh
Hordhac:Miiskeenna 35mm Isku dheelitirka kordhinta miiska miiska oo lagu xiro quful uu sameeyay mashiin sax ah oo sarreeya. Waxaan leenahay width 35mm iyo 48mm laba nooc oo kala duwan oo ah miisaska kordhin miiska. Waxaan u habeyn karnaa orodyahanada kordhinta miiska miiskaaga iyadoo loo eegayo qaabka miiskaaga. Haddii aad xiisaynayso bogagga miiska kordhinta, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
35mm Rise & Fall slide kordhinta miiska telescopic
Hordhac:Miiskeenna 35mm Rise & Fall miiska telescopic kordhinta ee lagu sameeyay mashiinka saxda ah ee sarreeya. Waxaan leenahay width 35mm iyo 48mm laba nooc oo kala duwan oo ah miisaska kordhin miiska. Waxaan u habeyn karnaa orodyahanada kordhinta miiska miiskaaga iyadoo loo eegayo qaabka miiskaaga. Haddii aad xiisaynayso bogagga miiska kordhinta, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Ballaaran 48mm kanaalka telescopic ee miisaska cuntada lagu dheereeyo
Hordhac:Wareeggeena Width 48mm kanaalka telescopic ee miisaska cunnada lagu dheereeyo ee lagu sameeyo mishiinka saxda ah Waxaan leenahay width 35mm iyo 48mm laba nooc oo kala duwan oo ah miisaska kordhin miiska. Waxaan u habeyn karnaa orodyahanada kordhinta miiska miiskaaga iyadoo loo eegayo qaabka miiskaaga. Haddii aad xiisaynayso bogagga miiska kordhinta, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
48mm Hal dariiqa Kordhinta miiska
48mm telescopic kubad miis sita miis kordhin kordhin
Hordhac:Our 48mm telescopic kubad miiska dhalista slide kordhin miiska by mashiinka sax sare. Waxaan leenahay width 35mm iyo 48mm laba nooc oo kala duwan oo ah miisaska kordhin miiska. Waxaan u habeyn karnaa orodyahanada kordhinta miiska miiskaaga iyadoo loo eegayo qaabka miiskaaga. Haddii aad xiisaynayso bogagga miiska kordhinta, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
YA-4804 Wareeg laba jibbaar kanaal telescopic kanaal ah
Hordhac:Our Ya-4804 Double-dekedda miiska telescopic kordhinta miiska kordhin mashiinka sax sare. Waxaan leenahay width 35mm iyo 48mm laba nooc oo kala duwan oo ah miisaska kordhin miiska. Waxaan u habeyn karnaa orodyahanada kordhinta miiska miiskaaga iyadoo loo eegayo qaabka miiskaaga. Haddii aad xiisaynayso bogagga miiska kordhinta, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Jadwalka Iskuxirka Qaybaha Kala Duwan (Nidaamka miiska kordhinta)
Hordhac:Qaybtayada Iskuxidhka Qaybaha Kala Duwan ee Qaybta (miiska miiska kordhinta) ee lagu sameeyay mashiinka saxda ah. Waxaan leenahay width 35mm iyo 48mm laba nooc oo kala duwan oo ah miisaska kordhin miiska. Waxaan u habeyn karnaa orodyahanada kordhinta miiska miiskaaga iyadoo loo eegayo qaabka miiskaaga. Haddii aad xiisaynayso bogagga miiska kordhinta, fadlan si xor ah nala soo xiriir.